RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay Man United ka gaartay kooxda Hull City ee afar dhammaadka League Cup – Gool FM
(Manchester) 11 Janaayo 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ballan ka sii samaysatay final-ka League Cup kaddib markii guul 2-0 ka gaartay naadiga Hull City oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Old Trafford lugta hore ee afar dhammaadka League Cup.
Labo gool oo ay kala dhaliyeen qeybtii labaad ee ciyaarta Mata iyo Fellaini ayaa lagu kala diray kooxda shabeelada lagu naanayso ee Hull City.
>- Hull City ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso mid kasta oo ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Man United, iyadoo saddex jeer guuldarro la kulantay, halka midka kale ay barbaro gashay.
>- Man United ayaa guul gaartay 12 ka mid ah 13-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Hull City tartammada oo dhan, iyadoo kulanka kalena uu barbaro ku dhammaaday.
>- Dhammaan saddexdii gool caawin oo uu Henrikh Mkhitaryan u sameeyey kooxda Manchester United ayaa yimid iyadoo la ciyaarayo tartankan EFL Cup.
>- Marouane Fellaini ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey League Cup tan iyo bishii Agoosto sanadkii 2013-kii, markaasoo uu ka dhaliyey kooxda Stevenage isagoo ka tirsanaa Everton.
>- Juan Mata ayaa dhaliyey saddex gool afartiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ciyaartay tartankan League Cup.. (2 gool waxa uu u dhaliyey Manchester United, halka goolka kale uu u dhaliyey kooxda Chelsea).
>- Man Utd ayaa guul gaartay 9 kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan markii ugu horreysay tan iyo bishii Febraayo sanadkii 2009-kii oo ay guul gaareen 11 kulan oo xiriir ah.
Zlatan Ibrahimovic oo xanuun jiro ah ku seegay kulankii xalay ee Man United…(Miyuu diyaar u yahay kulanka Liverpool??)